Ciyaarta Yoga oo dad badan gaalaysiin ku tilmaameen – Geelle Mag
Home » Faallooyin Uncategorized
Ciyaarta Yoga oo dad badan gaalaysiin ku tilmaameen
Ciyaar caan ah oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Hindiya ayaa waxay muran weyn ka dhalaisay Puntland. Muranka ayaa bilowday kadib markii xuska maalinta Yogada aduunka lagu qabtay goob fagaara ah magaalada Garowe.
Madaxweynaha Puntland oo ka qaybgalay ayaa ku tilmaamay caado fiican oo Puntland ka dhaxashahay dhqanka Hindidada.
Madaxweynaha ayaa la hadlay dadkii kasoo qaybgalay dabaal degga isaga oo uu garab taaganyahay safiirka u fadhiya Hindiya Soomaaliya sida ka muuqata nuuqaalka hoose.
Isla markiiba waxa baraha Bulshada is qabsatay dod ku saabsan arrinta oo aad u kala qaybisay Soomaalida. Duqa magaalada Garowe ayaa ku tilmaamay arrinta mid ka fog dhaqanka Soomaalida iyo kan Islaamka.
“Soomaalidu waxay leedahay dhaqan, ciyaaro iyo caadooyin suuban oo ciyaalka iyo cirooluhuba ku madadaalan karaan. Balse dhaqamadan cibaadooyinka duqoobey ee soogalootiga ah salka ku haya ma aha wax ku haboon in lasoo minguuriyo. Sidaa awgeed, shacab iyo dawladba waxaan ugu baaqayaa inaan diinteena iyo dhaqankeena wanaagsan ilaashanno.” Ayuu bartiisa Facebook kusoo qoray.
Halka gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland isna aad uga soo horjeestay isaga oo sheegay in ay tahay arrinta mid aan haboonayn.
Waa maxay Yogadu?
Yogada ayaan ciyaar jirdhis, dhaqan iyo diimeed ee kasoo jeeda dhaqanka Hindiya. Waxa la sheegaa in ay markii ugu horaysay ay soo baxday qarnigii 6aad kahor dhalashadii Ciise Calayhi salaam. dhaqan aya ku abtirsada mid kamid ah lixda dhaqan diimeed ee diinta Hindida. Waxa shan sano ka hor markii u horaysay ayaa loo gartay maalin caalami oo lo asteeyo maalinta Yogada Aduunka maadama ay ciyaarta aya caan noqotay oo wadama badan oo reer galbeed ah laga ciyaaro. in kastoo loo gartay jimicsi ahaan mid la isticmaali karo misna wax faaido caafimaad oo dheeriya oo ay leedahay misna lama xusin.
Soomaaliya goorma ayey soo gaartay?
Markii u horaysay ay ciyaartan Soomaaliya soo gaartay lama hubo, lakiin waa markii u horeyey ee Puntland lagu qabto. Waxa jira in mid kamid ah madaxda Elmen centre oo muqdisho ku yaal aad ciyaarta ugu baahiso baraha bulshada. Waxa Xaruntu baahisay muuqaal dhalinyaro rag iyo dumar leh oo tusinaya ciyaarta Yogada. Lakiin lama xaqiijin karo sababta ah in ay ciyaartan soo galiyaan wadanka ama inay yihiin ciddi ugu horaysay oo ku faafisa dhaqankan Soomaaliya.
Dadka dhaqanka Yoga ciyaara kama muuqato wax xiriir soo jireen oo ay la leeyihiin Hindiya sida inay horay ugu noolaadeen Hindiya ama wax ka barteen.